Parrot 3.11 inouya nemidziyo yekumhanyisa mota uye kurwisa ichipokana neMeltdown uye Specter | Linux Vakapindwa muropa
Parrot 3.11 inouya nemidziyo yekumhanyisa mota uye kurwisa ichipesana neMeltdown neSpecter
Parrot Kuchengetedza OS 3.11 Iyo inouya nekukosha kunatsiridzwa uye shanduko kana ichienzaniswa neiyo yapfuura vhezheni yeinozivikanwa kugovera yakapihwa kuchengetedzwa kwemakomputa. Vagadziri vacho vaita basa rakanakisa zvakare uye isu tinogona ikozvino kushandisa iyi distro yekubira zvine mutsindo nedzimwe nhau dzinonakidza dzatichazotaura nezvadzo. Imwe yeshanduko idzi kwave kuri kubatanidzwa kwezvimedu kugadzirisa iyo "yemafashoni" Meltdown uye Specter kushomeka izvo zviri kutaurwa nezvazvo zvakanyanya pasocial network nemablog.
Pamusoro peizvi zvigamba, zvimwe zvipuka kubva mushanduro dzakapfuura zvakagadziriswa uye zvishandiso zvakawedzerwa, yakagadziridza iwo aripo kune mamwe maazvino vhezheni uye iwe zvakare uchawana yakakosha shanduko mune avo mashandiro. Semuenzaniso, isu ikozvino tave neLinux 4.14 kernel uye zvese zvitsva maficha uye madhiraivha izvo kernel iyi inounza kune yedu Parrot Secuirty OS kugovera mukuburitswa kutsva kwebazi re3x rave nesu kwenguva refu. Kwete chete Metldown uye Specter anga ari mapoinzi akakosha mukusimudzira, zvakare ine zvimwe zvakawanda zvekuvandudza kwekuchengetedza ...
Imwe shanduko yakakosha ndeyekuti iwe uchave uine menyu ine zvishandiso ku kubira mota, hongu unonzwa sei. Mune ino menyu pane muunganidzwa wakanaka weakavhurika sosi maturusi akagadzirirwa kuyedza kana kukanganisa kuchengetedzwa kwemotokari, pamwe nekuteedzera CAN network. Kana iwe ukasangana nezvinetso zveMetasploit nePostgreSQL muhupenyu hwehupenyu, ikozvino iwe unofanirwa kuziva kuti iwo akakwenenzverwa kugadzirisa izvi, pamwe nekuunzwa kweMozilla Firefox 58.0 "Quantum" yewebhu browser. Kune rimwe divi, kudzikama kweiyo distro simaki yakagadziridzwa zvakare, pamwe nekunakidzwa kugadziridzwa kweiyo graphical system stack.
Sezvandambotaura, mamwe maturusi akagadziridzwa kune mamwe maazvino vhezheni, pamusoro pekuve neshanduko dzemhando dzakasiyana dze Parrot Studio uye Parrot Imba nematurusi ekugadzira. Pamwe isu hationi vhezheni itsva yebazi iri, chiri chokwadi ndechekuti panogona kunge paine zvidziviriro zvekuchengetedzwa kwe3.11, asi timu yekusimudzira yatotarisana neParrot Security OS 4.0 ... distro, unogona kuwana iyo zviri pamutemo webhusaiti yepurojekiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Parrot 3.11 inouya nemidziyo yekumhanyisa mota uye kurwisa ichipesana neMeltdown neSpecter
VLC media player inovandudzwa kune yayo nyowani vhezheni 2.2.8
Iyo inotevera vhezheni yePop! _OS Linux ichave iine disk encryption mune iyo inosimudza